Dowladda Ingiriiska oo Bixineysa Malaayiin Doolar oo looga Hortagayo Abaaro kale oo ku dhufta Geeska Afrika | Wardaye Online
Dowladda Ingiriiska oo Bixineysa Malaayiin Doolar oo looga Hortagayo Abaaro kale oo ku dhufta Geeska Afrika
Published on June 19, 2017 by war · No Comments
Xoghayaha Horumarinta Caalamiga ah Priti Patel ayaa maanta ku baaqay dadaal cusub oo dheeri oo wadajir ah si looga hortago in malaayiin qof u dhintaan gaaji iyo cudur.
Gabbaad oo ay helaan 100,000 oo qof
Tani waa abaartii labaad ee Itoobiya soo marto muda laba sanadood. Itoobiya waa wadanka labaad oo marti galiyay qaxootiga Afrika taas oo ciriiri galisay dhaqaalaha Itoobiya oo ay joogaan 880,000 qaxooti oo ka soo cararay dagaalada iyo rabshadaha ka socda wadamada deriska.
UK ayaa waxay la shaqaynaysaa bahwadaagta caalamka si loo hagaajiyo kaabayaasha, adeegyada deegaanka iyo abuurista fursado shaqo si Itoobiya ay ula qabsato kororka qaxootiga iyo ka hortagga socdaalka dibadda.
Priti Patel ayaa booqatay xarunta cunto-qaybinta Itoobiya si ay u aragto sida gargaarka UK u garab qabto dadka khatarta ugu jira gaajada iyo in ay la kulanto shaqaalaha gargaarka ee UK ee jooga safka hore. Waxay sidoo kale booqatay xarun caafimaad, oo ka mid ah kuwa badan oo ay taageerto UK, si ay u aragto sida carruurta nafaqadarada heyso ay u helaan taageero nafaqo, oo ay ku jiraan looska la tumay oo ay ka helaan nafaqooyin muhiim ah